Ntuzi 24 kachasị mma Echiche Echiche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kachasị mma 24 Echiche Ebumnobi Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Ndi mmadu ole na ole na-echeta ntigide aka mgbe mmadu furu efu onye nwere ihe di mkpa na ndu ha. Ndị ọzọ ndị ọzọ nwere ike ime ka ha cheta oge ụfọdụ na ndụ ha.
1. Di na nwunye akpụ akpụ mgbanaka egbu
2. Ụdị mgbanaka mgbapụta
Ịchọta tattoos dị nkọ bụ ihe ị ga-achọ ma ọ bụrụ na ị nwere onye ọlụlụ nke merela ma ọ bụ ka mezie.
3. Ụdị Mgbatị Mgbasa
Ebumnuche nke ịchọta ụdọ #tattoo aghọwo ihe na-eme ka egbu egbu a dị egwu. Ogologo oge gara aga, e nwere ndị na-atụ egwu ịbanye n'ime ha mana taa, a na-emesi gị obi ike na a ga-emecha egbu egbugbu gị.
4. Ụdị Mgbu Ụjọ
Ụda ihe egwu na-adọrọ adọrọ. Mgbe ị na-eche echiche ịlụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ị na-emekọ ihe, mgbe ahụ egbu a aghọwo ihe ị nwere ike iji. Ọnụ ego nke ime ego a ji tụnyere ụfọdụ tattoos dị mgbagwoju anya
5. Akara mmachi na-acha ume
Mgbe ị na-eche ma ị ga-egbu egbu ma ọ bụ, ị ga-ahọrọ ebe ị ga - esi nweta ya na ahụ gị. Otú ọ dị, akara ntanetị bụ otu n'ime mkpịsị ole na ole nke naanị nwere ntinye aha.
6. Mara mma mgbanaka akara
Kedu ka ị na-achọ egbu egbu dị ka nke a? The #design dị mfe, ma, ọ dị mma ka ị ghọta. Nke a bụ ihe mere ị nwere ike iji egbu egbu gị.
7. Nnukwu egbu egbu
Gbaa mbọ hụ na ị dị njikere ileba anya na ọtụtụ atụmatụ tupu ị banye. Ngwori egwu dị oke na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche ma ọ bụ ọrụ gị iji hụ na a na-ahaziri gị onwe gị dịka ị chọrọ ya.
8. Ụdị mgbanaka pụrụ iche
E nwere ụfọdụ ihe dị mkpa ị ga - ebu tupu i nwee ụdị pụrụ iche. Mgbe ị dị njikere iji akara egbugbere ọnụ gị dị mma, ọ dị mkpa na ị ga-abịa na onye gị na ya ga-ahọrọ imewe ahụ nke na-eme ka ọdịiche dị iche.
9. Egbu egbugbu mara mma
A pụghị ileghara akwara mgbochi magburu onwe ya anya mgbe ọ bụla ị hụrụ ya. Anyị ahụla ụmụ nwanyị ndị na-ejiri ihe mgbochi ndị a na-agbanye n'ọzọ ọzọ. Nke a bụ ihe mere ị na-ahụ ọtụtụ ndị ikom na ndị inyom lụrụ di na nwunye na-ahọrọ ụdị ụdị igbu a.
10. Na-egbu egbu egbu
Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ụdị ụdị egbugbu ị na-achọ, ịnwere ike ịjụ ajụjụ na ọbụna gaa na ntanetị iji jide n'aka na nhọrọ gị bụ nke zuru okè.
11. Ụdị egbugbu mara mma
Ntucha mara mma dị mma ị ga-enweta. Ị gaghị achọ ka mkpịsị aka gị lere ya? Ịnwere ike ịhazi ụdị igbu egbugbu nke gị
12. Ụdị Mpempe Dị Mma
13. Ụdị mgbanaka Chic
N'ezie, onye ọ bụla nke na-ahụ ụdị egbugbere ọnụ a na-ahụ n'anya ga-ahụ n'anya. A gaghị ahapụ gị naanị mgbe ị hụrụ ụdị aghụghọ a. Kedu ka ị chọrọ ka imewe gị dị?
14. Mma Mgbachi kacha mma
15. Ụdị igbu egbucha mara mma
Ihe kachasị mkpa ị ga-atụle, ọ bụrụ na nke a bụ akpa akara ntanaka mbụ gị, bụ ma ọ ga-agbanye ebe ị chọrọ ya. Ebe ị na-egbu egbu bụ ihe ga-ekpebi otú obi ga-adị gị mma mgbe ọ ga-adịrị ya.
16. Anya na-atụ anya mgbanaka akpa
17. Ụda akara ụda ebere
Nye ụfọdụ ndị, oke ahụhụ bụ mgbe ha na-anọdụ ala maka akwara iji dọta ahụ ha. Otú ọ dị, akara ndị a na-ahụ maka ndị hụrụ n'anya anaghị ewe oge tupu ha abanye n'ahụ. Mgbe ị nwere ike ịhọrọ akụrụngwa dịka nke a, ị ga-enwe obi ụtọ na ị na-eto eto.
18. Ụdị mgbanaka ahaziri
Ụfọdụ ndị mmadụ ekwuola na aka ha, ukwu ụkwụ, ụkwụ, ụgbụgbọ na mpaghara spain, bụ ebe kachasị njọ. Otú ọ dị, ịhazi mgbanaka akara gị nwere ike ịbụ otu n'ime nhọrọ ndị ziri ezi ị nwere ike imere onwe gị.
19. Ụdị Ụdị Mfe
20. Ụdị Ọcha Cool
Ị nwere ike ịchọ ịma na ndị na-egbu egbu na-egbu uwe ga-eyi uwe dị iche iche n'eziokwu nke na egbu egbu bụ ihe mebiri emebi ruo mgbe ọ gbakee. Ya mere, mgbe ha na-eru akpụkpọ gị, ọ dị ha mkpa iji hụ na ha na-ekpuchi aka ha, nke mere na ọ dịghị ihe e ji egbu obe.
21. Di na Nwunye Mpempe Aka
Nke a bụ maka nchekwa ha dị ka nke gị. Mgbe ha na-ejide n'aka na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịnwe ọbara na akpụkpọ ahụ gị, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka ha kpuchie onwe ha ka ha ghara ịchọta ọbara ha.
22. Ụdị Mkpanaka Enyi
23. Ụdị Egbu Mgbu
Ozugbo ọgwụgwọ ahụ gwụrụ, ị ga-ahụ nri nri na mpaghara ahụ, ọ nwere ike ịbụ nnukwu ọnọdụ. Na-atụ anya nzere maka ọ dịkarịa ala awa iri abụọ na anọ ka ahụ gị na-arụzi onwe ya. Nke a abughi ihe kwesiri ime ka obi ghara idi gi ike.
24. Ịhụnanya mgbanaka Tattoos
enyi kacha mma enyiNtuba ntughariegbugbu egbugbuima ima mmaegbu egbu okpuUche obingwusi pusiegwu egwuna-adọ aka mmandị na-egbuke egbukemma tattoosudara okooko osisimehndi imeweegbu egbu hennan'olu olunnụnụakwara obiagbụrụ ebona-egbu egbuegbu egbu ebighi ebiaka mma akaakpị akpịAnkle TattoosEgwu ugorip tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbuzodiac akara akaraụmụnne mgbundị mmụọ oziọdụm ọdụmegbu egbu diamonddi na nwunyeaka akaakara ntụpọechiche egbugbuGeometric Tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu mmiriỤdị ekpomkpaegbu egbu osisi lotusegbu egbu egbuazụ azụenyí egbu egbuụkwụ akakoi ika tattooọnwa tattoosokpueze okpuezearịlịka arịlịkaaka aka